Matongerwo eNyika, 08 Kurume 2018
China 8 Kurume 2018
VaMnangagwa Voyambira VaMugabe, Uko Vashandi Vavo Vachitorwa neMauto
Vakatiwo vari kusora VaMugabe kuona zvavari kuronga votora matanho akakodzera kana zvaonekwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya muHarare pamusangano wevechidiki vebato ravo.
Kurume 07, 2018
VaTillerson Vanoshanyira Africa, Vachitanga neEthiopia
Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica, VaTillerson vari kusimbaradza nyaya dzekutengeserana, kurwisa vanopfurikidza mwerouye kukurudzira hutongo hwejekerere mu Africa.
Gurukota reRussia, VaSergey Lavrov, Vanosvika muZimbabwe
Gurukota rinoona nezvekunze kweRussia, VaSergey Lavrov, vasvika muHarare neChitatu manheru umo vari kutarisirwa kusaina zvibvumirano zviviri munyaya dzehupfumi zvakanangana nemaindasitiri pamwe nezvekurima.
Masoja Orova Nhengo dzeMDC-T kuChinhoyi
Mumwe mugari, VaKelvin Mahwani, vanoti musoja akavarova ayivapomera mhosva yekufarira bato reMDC-T achiti ndivo vakakokera musangano wakaitwa neSvondo.
MDC-T Yoyambirwa Kusaita Rusarura Rudzi Kuitira Kuti Ibatane Zvakasimba
VaMaphosa vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona kwete kuti ndeve rudzi rupi.
VaMnangagwa Vanoita Hurukuro neVakuru veMakereke
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti zvakakosha kuti vemachechi vaite misangano yekubudirana pachena nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sangano reDiaspora Care Forum Roumba Hombe Ichabatsira Vari Kunze kweNyika
Homwe yeDiaspora Care Forum iyi, iyo ichange ichishanda semushandirapamwe, inonzi Diaspora Care Forum, uye iri kutsigirwa nemakambani akati kuti.